Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay Cadaaladda in la marsiinaa... | Universal Somali TV
Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay Cadaaladda in la marsiinaayo dadkii ka dambeeyay dilkii Taliyihii Booliska Hiiraan
Madaxweynaha Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo shir jiraaid ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa wacad ku maray cid kasta oo ka dambeysay Dilka Taliyihii Qeybta Boliiska Gobolka Gobolka Hiiraan Col. Maxamed Mocow in la marsiin doono Cadaaladda.
Madaxweynaha oo ka tacsiyeynayay geerida Allaha u naxariistee marxuum Maxamed Mocow, ayaa qoyska taliyaha iyo Guud ahaan Reer Beledweyne ugu baaqay in ay isdejiyaan oo muujiyaan xasilooni waxaana uu u balanqaaday in cadaalad ay heli doonaan.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo sii hadlay ayaa Sheegay Guddiga Dowladda Federaalka Ay magacowday, iyo Guddi Wasiira ah uu magacaabay, baaritaan dhab ah ay ka sameyn doonaan kiiskani cidii fulisay, cidii amartay, iyo ujeedada laga lahaa ayna ka soo bixi doonaan xaqiiqda dhabta, waxaana madaxweynaha uu xusay in uusan ka hor dhaceynin baaritaanka.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa caawa ku hooyana Magaalada Baledweyne oo uu tagay galabta, halkaasi oo ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xil ka qaadistii lagu sameeyay Gudoomiyihii Gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed.
Kan-xigaRaiisal Wasaare Khayre oo xalay korme...
Kan-horeRaiisal Wasaare Khayre oo dhiiragelin...
53,450,324 unique visits